Wafdigii Xaqiiqaraadinta Ururka Igad Kismaayo kulamo kula leh Dhinacyada… – SBC
Wafdigii Xaqiiqaraadinta Ururka Igad Kismaayo kulamo kula leh Dhinacyada…
Waxaa lagu wadaa in maanta ay dib uga ruqaansadaan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose wafdi balaarna oo ka socday Urur goboleedka Igad oo halkaasi u tagay gelinkii hore ee shalay Xaqiiqo raadin .
Intii ay ku sugnaayeen magaalada Kismaayo wafdigan oo uu horkacayo Xog hayaha guud ee ururka Igad waxa ay kula kulmeen xubnaha sar sare oo ka tirsan Maamulka Cusub ee Jubaland, siyaasiyiin uu ka mid yahay Bari Hiiraale oo sheegtay in uu yahay Madaxweynaha Jubaland iyo weliba qeybaha kala duwan ee Bulshada Siiba waxgaradka, Salaadiinta iyo Odayaasha gobolada 3da ah.
Waxa ay kala hadleen dhamaan dadkaas ay la kulmeen wafdigan arimo badan oo xaqiiqo raadin u ahaa wafdigan kuwaas oo ku qotomay arimaha maamulka cusub ee lagu aas aasay shirkii mudada ka socday Jaamacada Kismaayo.
Waxay Weydiinayeen Xubnaha ay la kulmeen siiba Odayasha, Salaadiinta iyo waxgaradka kale ee bulshada Su’aalo xaqiiqo raadin ah oo ku aadan sida ay u arkaan maamulada ka jira gobolka iyo sida ay u arkaan maamulka cusub ee lagu dhawaaqay.
Xogo farabadan ayay ka ururiyeen dhamaan dhinacyadaas ay la kulmeen, waxayna kula noqon doonaan halkii ay yimaadeen ka dibna waxaa la sugayaa go’aanka ka soo baxay Xaqiiqa raadintooda.
SBC INternational Kismaayo.